OSHIOMOLE KWURU NA ORTOM AHAPUBELE APC
Previous NAPTIP NA-ANAPUTA MMADU 468 NDI E MERURU AHU
Next 2019: ADC EKWELE NKWA IJI I WEGHARA OYO
Onye isi oche nke Congress All Progressives Congress (APC), Adams Oshiomole akọwawo ọpụpụ nke gọvanọ Benue State, Samuel Ortom, site na nnọkọ dị ka nrọ.
N’igosi ihe onye a na-akpọ ntule, Monday na Abuja, Oshiomole kwuru na ndị ahụ nwere mmekọrịta dị mma na ndị Ọtọdọks.
MMERI FRANCE BU WORLD CUP NKE ABUO HA EMERIWO
Ọ gwara ndị nta akụkọ mgbe ha na ndị òtù Kọmitii Na-ahụ Maka Ngwá Ọrụ (NWC) na-emechi ọnụ ụzọ.
“Amaara m na Gọvanọ Ortom bụ onye agadi nke òtù ahụ, ọ gwawo m ugboro ugboro na-ebipụta ma gwa m otu onye na ọ gaghị ahapụ APC ọ gwụla ma a chụpụrụ ya.
“Ebe ọ bụ na m weere oche nke oriri a na ndị ọrụ ibe m na NWC, amaara m nke a, na anyị emechighị onye ọ bụla gọvanọ na ọ bụghị Gọvanọ Ortom.
“N’ụbọchị ndị a nke mgbasa ozi mgbasa ozi, agaghị m azaghachi na nrọ na akụkọ ndị a na-akọwaghị,” ka onyeisi oche APC kwuru.
USAIN BOLT SETIPURU MAKA ORU FOOTBALL NA AUSTRALIA
N’ihe mmeri a na-enwe n’ememe ntuli aka nke ochichi Ekiti, oshiomhole kwuru na APC enweghi obi uto obughi n’ihi na o meriri ntuli aka, ma karia ya na usoro.
“Anyị ga-achọ ijide n’aka na nsonaazụ nke ntuli aka na-egosipụta ọchịchọ nke ndị mmadụ.
“Ị ga-echetakwa na enwere nsogbu banyere ndenye ego ndị uweojii.
“Enwere m obi ụtọ dị ukwuu na ndị niile na-akọwa ma hụ gụnyere European Union nwere obi ụtọ na nhoputa ndi ochichi enweghi ike ime ihe ike nakwa na usoro ahụ nweere onwe ya.
“Anyị enweghị ike ịrịọ maka ihe ndị ọzọ, anyị na-eme ememe ọ bụghị nanị eziokwu ahụ anyị meriri, anyị na-echeta na n’okpuru ọchịchị nke President Muhammadu Buhari, anyị nwere ike ịhụ na a ga-eme nhoputa ndi mmadu n’enweghị onye a na-elekọta n’ụlọ ọgwụ,” ka o kwuru.
Oshiomole kwuru na ndi otu enwere obi uto na ha mezuru na nhoputa ndi ochichi ma gwa Dr Kayode Fayemi onye gomenti – ndi ozo ka ha chegharia uche na ihe nile kwesiri igosi ya tupu o buo ya.
2019: ADC EKWELE NKWA IJI I WEGHARA OYO
O kwukwara na ndi Ekiti enweghi ike ichere ichota ndi ndu ndi ozo nke ga-eme ka ndi mmadu nwee ndu.
O kwukwara na onye isi ochichi a gbara Fayemi ume ka o choo amamihe iji buru ndi mmadu chee echiche di iche iche nakwa ka ha gbasoo mmegide.
“N’ihe dị iche iche, ọchịchị onye kwuo uche ya na-arụ ọrụ nke ọma n’agbanyeghị onye ga-emeri. Ọ bụrụ na onye mmeri na-achịkwa maka ọdịmma nke mmadụ nile, n’eziokwu, ndị mmadụ agaghị enwe ike ida na ọchịchị onye kwuo uche ya.
“Anyị kwenyesiri ike na Fayemi ga-eme ihe niile, gụnyere ịza nnukwu ibu ọrụ,” ka onyeisi oche nke APC mesiri ike.
adams APC EDO governor hot iheneme IHENEME NOBODO ihenemenobodo Isimbido ISIMBIDO POST isimbido posts isimbido tv isimbidopost ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV LATEST new news NIGERIA NIGERIAN nobodo ORTOM oshiomole political POLITICS quit state update